Biyaha la miiray ma u fiican yihiin Kalluunka - Baaskiil Baaskiil
Bogga ugu weyn » Kaladuwan » Ma Biyo Dhaafsan Kalluun U Fiican
Kalluunku ma ku noolaan karaa biyo nadiif ah?
Waa maxay biyaha ugu fiican kalluunka?
Waa maxay biyaha dhalada ah ee badbaadada u ah kalluunka?
Biyaha la nadiifiyey ma u badbaado kalluunka?
Biyaha saafiga ah ma u fiican yihiin kalluunka dahabka ah?
Ma u isticmaali karaa biyo la kariyey kalluunka beta?
Biyaha guga ama biyaha la miiray miyay u roon yihiin haanta kalluunka?
Intee in le'eg ayay qaadataa in biyaha qasabaddu ay ammaan u yihiin kalluunka?
Waa maxay biyaha u fiican kalluunka dahabka ah?
Ma u isticmaali kartaa biyaha dhalada ah haanta kalluunka?
Sideed uga dhigaysaa biyaha badbaadada kalluunka?
Sideen dib ugu soo celin karaa biyaha RO ee ku dhex jira aquarium-kayga?
Biyaha la miiray miyay u fiican yihiin taangiyada biyaha cusbada?
Kalluunka Dahabku ma ku noolaan karaa biyo koloriin leh?
Maxaa loo isticmaalaa biyaha nadiifka ah?
Intee in le'eg ayaan sugayaa si aan kalluunkayga ugu celiyo haanta ka dib markii aan nadiifiyo?
Immisa jeer ayaad biyaha ku beddeshaa haanta kalluunka?
Biyo noocee ah ayuu kalluunka beta u baahan yahay?
Waa inaadan u isticmaalin biyaha la miiray ee isbeddelada biyaha ee haanta kalluunkaaga. Kalluunka iyo dhirta ayaa si isku mid ah u isticmaala biyaha ku jira macdanta, halkaas oo ay dadku ka heli karaan dhammaan waxa ay u baahan yihiin cuntada. Ma aha oo kaliya, laakiin macdanta ayaa nidaamin doonta oo dejin doonta heerarka pH ee biyaha. Xitaa lulida pH ee ugu yar waxay khatar u noqon kartaa kalluunka.
Haamaha kalluunka waa in aan lagu shubin biyo nadiif ah sababtoo ah macdanta ayaa laga saaraa. Macdanta sida birta iyo kaalshiyamku waxay caawiyaan kalluunka si uu u horumaro. Intaa waxaa dheer, sababtoo ah kalluunku waxay leeyihiin xuub yar-yar, kalluunku wuxuu la kulmi karaa dhaawac halis ah oo biyo saafi ah.
Ilaha Biyaha Aquarium Biyaha Tuubada Dawladda Hoose. Waxaa laga yaabaa in sida ugu fudud ee kalluunkaaga lagu siin karo guri biyo leh ay tahay inaad shido tuubada. Ceel Biyo. Haddii gurigaagu leeyahay biyo ceel, biyuhu kuma jiraan koloriin. Biyo dhalada ah. Biyaha roobka. Biyo Diil. Reverse Osmosis (RO) Biyaha. Biyo Deionized (DI)
Hubi in biyuhu aan la dhalaalin, laga saarin, dhadhamin ama aan la saarin. Waa in lagu shubaa meesha isha, aan kaarboonsanayn, biyaha dabiiciga ah. Biyaha osmosis-ka rogaal celiska ah waxa laga yaabaa in aanay ammaan u ahayn kalluunka sababtoo ah waa la sifeeyaa, qaar ka mid ah waxa ku jira macdanta ayaa la soo saari doonaa habka.
Biyaha la miiray ama la sifeeyay, aad bay uga duwan yihiin biyaha caadiga ah ee qasabadaha, sababtoo ah waxaa lagu farsameeyay in laga saaro dhammaan kiimikooyinka, macdanta iyo nafaqooyinka, taas oo kaa tagaysa wax aan ahayn biyo saafi ah. Biyaha noocaan ah ee kalluunka beta laguma talinayo.
Ku ridista kalluunka dahabka ah ee biyaha tuubada koloriin leh, dhalooyinka ama biyaha la miiray, ama biyaha aad u acidic ama alkaline, waxay noqon karaan dhimasho, Ponzio ayaa yidhi. Goldfish, xubnaha qoyska carp, waxay soo saaraan qashin badan, markaa waxaad sidoo kale u baahan doontaa nidaamka shaandhaynta. Qashinku wuxuu ka kooban yahay ammonia, taas oo iyaga sun ah.
Haddii aad rabto in aad hoos u dhaadhacdo jidkaas distilled/RO ayaa la door bidaa, laakiin tani waa in dib loo habeeyo. Waxaan ahay baayooloji badeed oo si badheedh la'aan ah ayaan tijaabadan u sameeyay tijaabooyinka sunta ah ee kalluunka. Biyaha la miiray oo keliya ee weel aad nadiif u ah ku jira waxay si degdeg ah u dilaan kalluunka. Ma aha la'aanta macdanta si toos ah.
Had iyo jeer u daa biyaha tuubada inay fadhiistaan ​​24 saacadood si ay koloriintu u hesho fursad ay ku soo baxdo. Ama waxaad ku daweyn kartaa biyaha kiimiko kale haddii aadan awoodin inaad sugto.
Goldfish waa kalluunka biyaha qabow, taasoo la macno ah inaysan u baahnayn kuleyliyaha. Goldfish waxay door bidaan biyahooda inta u dhaxaysa 62 iyo 72 darajo Fahrenheit. Sidoo kale, kalluunku wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa biyaha jilicsan, taasoo la macno ah alkaliinkiisu inuu ka sarreeyo aashitada. Kalluunka dahabiga ahi waxa uu baraa marka pH-ga biyahoodu u dhexeeyo 7.0 iyo 7.4.
Tusaale ahaan, qaar ka mid ah biyaha dhalada ah ayaa weli u baahan in koloriin laga saaro. Iyo sababta oo ah biyaha caagagga ah waxaa loogu talagalay in aan cabno, inta badan aad bay uga qaalisan yihiin isticmaalka biyaha saafiga ah. Waxaan kaliya ku talinayaa in loo isticmaalo biyaha dhalada ah sida haanta kalluunka marka ay xaalad degdeg ah jirto, marka aan wax kale la helin.
Isku darka kalsiyum chloride, cusbada Epsom, iyo dubista soodhaha ayaa sameeya waxyaabo yaab leh si ay dib ugu soo celiso biyaha RO haanta kalluunkaaga. Si loo wajaho hab ka sii wanagsan, waxaanu kugula talinaynaa in haantaada lagu rakibo kartoonada dib-u-soo-celinta.
Dhibka haysta biyaha la miiray ayaa ah inay aad u nadiif yihiin nolosha badda. Waxaa soo baxday in kalluunka uu u baahan yahay wax ka badan hydrogen iyo oxygen si ay u noolaadaan. Tani waxay ka dhigan tahay inaad iska ilaaliso isticmaalka biyaha la miiray, gaar ahaan marka aad baddalayso biyaha ku jira aquarium-kaaga.
Koloriintu isla markiiba way baaba'daa ka dib marka ay la kulanto jawiga iyo chloramine/ammonia waxaa nuugaya warbaahinta dhuxusha ee ku jirta shaandhadaada. Kalluunkaagu wuu fiican yahay waana inuu ku noolaadaa nolol dheer oo leh daryeel habboon. Kalluunka Goldfish wuxuu ku noolaan karaa in ka badan 10 sano (celcelis ahaan) maxaabiis ahaan. Dhab ahaantii, kii ugu da'da weynaa ee la diiwaan geliyay wuxuu ahaa 43 jir.
Isticmaalka biyaha la miiray waxa kale oo ka mid ahaa samaynta xabadaha barafka, maraq, kafeega, shaaha, baastada, bariiska, caanaha carruurta, casiirka, Kool-Aide®, ama si fudud biyo caafimaad leh oo la cabbo. Nasiib darro, wasakhooyinka laga helo biyaha tuubada ayaa wali helaya jidka jidhkaaga ilaa aad had iyo jeer isticmaasho biyo nadiif ah.
Haddii wax badan aysan iska bedelin aquarium-ka, waxaad dib u celin kartaa kalluunkaaga 24 saacadood ka dib markaad dhigto dhammaan qalabka, qurxinta, iyo dhirta taangiga.
Ma Biyo Distilled Ok Kalluunka Betta
Jawaab Degdeg ah: Kalluunku ma ku Neefsan karaa Biyo Dhadhan
Ma Badbaadiyaan Biyaha Kaluunka
Jawaab Degdeg ah: Ma Ok in Eeyaha La Siiyo Biyo Dhaafsan
Jawaab deg deg ah: Eeydu ma cabbi karaan biyo nadiif ah
Eeyadu ma yeelan karaan biyo nadiif ah
Ma Ok Inaad Siisid Eeygaaga Biyo Dhan
Su'aal: Kalluunku ma ku noolaan karaa biyo nadiif ah
Kalluunka Betta ma ku badbaadi karaa biyo nadiif ah
Ma Kalluunka Biyaha Loo Isticmaali Karaa
Su'aal: Ma U Isticmaali Kartaa Biyaha Kala Duwan Ee Kalluunka